ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို စိတ်အားထက်သန်သော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ဤအချက်သုံးချက်ကို လုပ်ဆောင်သင့်သည် | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 2, 2021 ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 2, 2021 ဂျူလီဂရင်းဝုဒ်
ကမ္ဘာကြီးသည် 2020 တွင် lockdown ဖြစ်နေချိန်တွင်၊ ရုပ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများကြွယ်ဝသော ဒစ်ဂျစ်တယ်အတွေ့အကြုံများက ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ချိတ်ဆက်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမိုရှေးကျသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများကို ယခင်ကထက် ပိုမိုအားကိုးပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝများကိုမျှဝေကာ လုံခြုံသောအကွာအဝေးမှ ချိတ်ဆက်ရန် ဆန်းသစ်ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းသစ်များကို လက်ခံကျင့်သုံးပါသည်။ Zoom မှ TikTok နှင့် Snapchat သို့ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျောင်း၊ အလုပ်၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ စျေးဝယ်ခြင်းနှင့် ချစ်ရသူများနှင့် အဆက်အသွယ်မပြတ်စေရန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ချိတ်ဆက်မှုပုံစံများကို ကျွန်ုပ်တို့အားကိုးထားပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ အမြင်အာရုံ၏ စွမ်းအားသည် အဓိပ္ပါယ်အသစ်ရှိသည်။
ကပ်ရောဂါလွန်ကမ္ဘာကြီး မည်ကဲ့သို့ ပြောင်းလဲတိုးတက်နေပါစေ သုံးစွဲသူများသည် ဘဝ၏ ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် အမြင်အာရုံအကြောင်းအရာများကို ဆက်လက်တောင့်တနေမည်ဖြစ်ပါသည်။
COVID-19 အကျပ်အတည်းသည် သုံးစွဲသူအချင်းချင်း အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အရှိန်မြှင့်ခဲ့သည်။
စီးပွားရေးရလဒ်များဆီသို့ ဦးတည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဤဖြစ်ရပ်မှန်အသစ်များကို ပြည့်မီရန်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ၎င်းတို့၏ပရိသတ်များနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ချိတ်ဆက်မှုများတည်ဆောက်ရန်အတွက် အမြင်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာသုံးခုကို အာရုံစိုက်သင့်သည်။
မိုက်ခရိုဘရောက်ဆာများနှင့် မျက်နှာပြင်အသေးစားချိတ်ဆက်မှုတွင် အလင်းကိုလင်းပါ။
စာတိုပေးပို့ခြင်းအက်ပ်များသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာပလပ်ဖောင်းများကို ကျော်တက်သွားသည်ကို သင်သိပါသလား။ လစဉ်အသုံးပြုသူဦးရေ 20%၊? သီးသန့်စာတိုပေးပို့ခြင်းအက်ပ်များတွင် အသုံးပြုသူအများအပြားနှင့်အတူ၊ ယခုအခါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် မိုက်ခရိုဘရောက်ဆာများမှတစ်ဆင့် သုံးစွဲသူများထံရောက်ရှိရန် အခွင့်အရေးရနိုင်သည် သို့မဟုတ် အဆိုပါစာတိုပေးပို့ခြင်းအက်ပ်များတွင် မျှဝေထားသည့် URL မှပေးဆောင်သော အဆိုပါအသေးစားမိုဘိုင်းအစမ်းကြည့်ရှုမှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ထိုမိုဘိုင်းလ်အခိုက်အတန့်များတွင် သုံးစွဲသူများထံရောက်ရှိရန်၊ ဖောက်သည်အခြေခံနှင့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုတွင် မည်သည့် microbrowser များ ရေပန်းစားသည်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ၌ Cloudinary ၏ 2021 Visual Media အစီရင်ခံစာထိပ်တန်း စာတိုပေးပို့ရေး ပလပ်ဖောင်း အမှတ်တံဆိပ်များ နှစ်သက်သဘောကျသည်မှာ iMessage ဖြစ်သည် - ၎င်းသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့် ကဏ္ဍများတစ်လျှောက် နံပါတ်တစ် နေရာကို ရရှိထားသည်။
WhatsApp၊ Facebook Messenger နှင့် Slack တို့သည် ဖော်ပြထားသော အခြားနာမည်ကြီး ပလပ်ဖောင်းများထဲတွင် ပါဝင်ပါသည်။ မှောင်မိုက်လူမှုရေး မမြင်နိုင်ဟုထင်ရသော မျှဝေမှုအမှတ်တံဆိပ်များကို ဖော်ပြသည့် ချန်နယ်များ ဤမျက်နှာပြင်အသေးစား ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအခွင့်အလမ်းများသည် ကလစ်အရေအတွက်နှင့် နောက်ထပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပေါ် ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး၊ ယနေ့ခေတ်အမှတ်တံဆိပ်များသည် လက်လွှတ်ရန်မတတ်နိုင်သော အရာများဖြစ်သည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် မိုက်ခရိုဘရောက်ဆာများအတွက် ၎င်းတို့၏ရုပ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများကို သီးသန့်အမှောင်-လူမှုရေးချန်နယ်များ၏ တစ်မူထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။ မိုက်ခရိုဘရောက်ဆာတစ်ခုစီသည် လင့်ခ်အကြိုကြည့်ရှုမှုကို ကွဲပြားစွာဖယ်ရှားပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် လင့်ခ်နှိပ်မှုများကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် ဤပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်သင့်သည်။ ရုပ်ပုံများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၊ လင့်ခ်များကို မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကြားတွင် မျှဝေသောအခါတွင် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ကောင်းမွန်သော ပထမဦးစွာ အထင်ကြီးအမြင်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။
စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ဇာတ်လမ်းများကို ဗီဒီယို၊ ဗီဒီယိုနှင့် အခြားဗီဒီယိုများဖြင့် မျှဝေပါ။
ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ဗီဒီယိုအသွားအလာ သိသိသာသာတိုးလာကာ ကျွန်ုပ်တို့၏သော့ခတ်ထားသောဖြစ်ရပ်မှန်များအပြင်ဘက်ကမ္ဘာဆီသို့ တံခါးပေါက်တစ်ခု ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
2019 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှစ၍ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတစ်လျှောက်တွင် ဗီဒီယိုတောင်းဆိုမှုများသည် 6.8% မှ 12.79% သို့ နှစ်ဆတိုးလာသည်။ ဗီဒီယို bandwidth သည် 140 Q2 တစ်ခုတည်းတွင် 2020% ကျော် တိုးလာသည်။
Cloudinary 2021 Visual Media ၏ အခြေအနေ
ဗီဒီယိုများ ဆက်တိုက် တိုးလာသည်နှင့်အမျှ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် သုံးစွဲသူများထံ ရောက်ရှိရန် ယခင်ကထက် ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကို ပိုမိုစီမံခန့်ခွဲပြီး ပြောင်းလဲနေသည်မှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ဤအားကောင်းသော ပုံပြင်ပြောခြင်းကြားခံအား နည်းလမ်းများစွာဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။
စျေးဝယ်နိုင်သော ဗီဒီယိုများ - e-Commerce အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်၊ စျေးဝယ်နိုင်သော ဗီဒီယိုများသည် ထုတ်ကုန်များကို အသက်ဝင်စေကာ စျေးဝယ်သူများအား ၎င်းတို့ ချက်ချင်းဝယ်ယူနိုင်သည့် သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာများသို့ ချိတ်ဆက်ပါ။
3D ဗီဒီယိုများ - ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်စာမျက်နှာတစ်ခုစီတွင် ခေတ်မီပြီး တုံ့ပြန်မှုရှိသောစျေးဝယ်အတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးရန် 360 ဒီဂရီ ကာတွန်းရုပ်ပုံများ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုကို 3D မော်ဒယ်မှ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
အသုံးပြုသူကြားခံဗီဒီယိုများ - ဟင်းချက်ချက်အကြံဉာဏ်များ သို့မဟုတ် အလှဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များကဲ့သို့သော အရာများကို ပြသပေးသည့် စားသုံးသူများအတွက် အွန်လိုင်းပလပ်ဖောင်းတွင် ချောမွေ့မှုမရှိသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အတွေ့အကြုံကို ဖန်တီးပေးသည့် အမှတ်တံဆိပ်အတွေ့အကြုံကို ဖန်တီးပေးသည့် ဗီဒီယိုများကို မမျှော်လင့်ဘဲ ဖန်တီးမှုနည်းလမ်းများဖြင့်လည်း ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ဤဗီဒီယိုများကို ပေါင်းစပ်ရန်၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အဖွဲ့များနှင့် ၎င်းတို့ကို ပံ့ပိုးပေးသော developer များ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ဗီဒီယိုပိုင်ဆိုင်မှု ၁၇ ကြိမ် ပြောင်းလဲပါ။. ဤသည်မှာ အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး အချိန်ကုန်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဗီဒီယိုကုဒ်ဒစ်များကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ စီမံခန့်ခွဲရန် developer များ လိုအပ်ပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအချိန်နာရီရာပေါင်းများစွာကို ချွေတာပြီး ထိုအချိန်ကို ပိုမိုဆန်းသစ်သောကြိုးပမ်းမှုများအဖြစ် ပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်ရန်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် လုပ်ငန်းစဉ်ကို မြန်ဆန်ချောမွေ့စေရန် AI ကို အားကိုးနိုင်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် မိုဘိုင်းအကောင့်များ ပြုလုပ်သည့်အခါတွင် မိုဘိုင်းတုံ့ပြန်မှုသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဝဘ်လမ်းကြောင်း၏တစ်ဝက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်၊ ၎င်းသည် ရုပ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများကို တုံ့ပြန်မှုရှိပြီး မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် သေချာစေခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ၎င်းတို့၏ အမြင်အာရုံပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် တုံ့ပြန်မှုရှိသော ဒီဇိုင်းကို အသုံးမပြုသူများသည် SEO အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေပါသည်။ ဂူဂဲလ်၏ Core Web Vitals အားလုံးသည် အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်သက်ပြီး မိုဘိုင်းတုံ့ပြန်မှုအား ဦးစားပေးခြင်းသည် အမှတ်တံဆိပ်၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ရှာဖွေမှုအဆင့်များတွင် အလွယ်တကူ တွေ့ရှိကြောင်း သေချာစေမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဖန်၊ ဤသည်မှာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း မတူညီသော ပလပ်ဖောင်းများသို့ ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများ ပေးပို့ရာတွင် လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။ မတူညီသော ပြတင်းပေါက်များ၊ လမ်းညွှန်မှုများနှင့် စက်ပစ္စည်းများဖြင့် ၎င်းကို မြှောက်ပါ၊ ၎င်းသည် အလွန်လွှမ်းမိုးသော အလုပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ မိုဘိုင်းလ်-ပထမကမ္ဘာတစ်ခုအတွက် အရာအားလုံးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် သေချာစေရန်၊ အမှတ်တံဆိပ်များသည် မျက်နှာပြင် သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းမခွဲခြားဘဲ တူညီသော အရည်အသွေးမြင့် အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန် အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ အလိုအလျောက်စနစ်ဖြင့်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် လုပ်ငန်းအသွားအလာတွင် ပိုမိုထိရောက်မှုကို မောင်းနှင်နိုင်ပြီး မိုဘိုင်းလ်တွင် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့် အတွေ့အကြုံကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေပါသည်။
Visual-First Engagement စွမ်းအားဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ချိတ်ဆက်မှုများကို တည်ဆောက်ပါ။
ကပ်ရောဂါဘေးမှ၊ မသေချာမရေရာသောအချိန်များတွင် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ၎င်းတို့၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်နှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည်ကို နားလည်ရန်လိုအပ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိရှိလာရပါသည်။ မိုက်ခရိုဘရောက်ဆာများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ နှင့် မိုဘိုင်းဝဘ်ဆိုဒ်များသည် စားသုံးသူများ၏ နှစ်သက်ရာအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံပုံကို ဆက်လက်ပုံဖော်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဤအတွေ့အကြုံများကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပေးပို့ရန်အတွက် အလိုအလျောက်စနစ်နှင့် AI တို့သည် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာသစ်၏ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏ဗဟိုချက်တွင် ရုပ်ပုံများဖြင့်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည် ဤအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကို ၎င်းတို့၏ အလုံးစုံမဟာဗျူဟာတွင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပြီး အမြင်အာရုံ-ပထမအတွေ့အကြုံများကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။
2021 ခုနှစ် Visual Media အစီရင်ခံစာ
Tags: 20213d ဗီဒီယိုများaiအလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှုမိုးတိမ်google core web vitalsစာပို့ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းများပိုးမွှားမိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှုမိုဘိုင်းဗီဒီယိုကမိုဘိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များတုံ့ပြန်မှုဒီဇိုင်းဈေးဝယ်နိုင်သော ဗီဒီယိုများပျင်းရိအမြင်မီဒီယာအခြေအနေရုပ်မြင်သံကြားမီဒီယာအစီရင်ခံစာအသုံးပြုသူကြားခံဗီဒီယိုများဗီဒီယိုကပိုင်ဆိုင်မှုဗီဒီယိုကုဒ်ဒရိုက်ဗီဒီယိုကိုကူးပြောင်းအမြင်အာရုံထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအမြင်မီဒီယာWhatsApp